Shirkadda Dalkom Soomaaliya oo daahfurtay adeegga cusub ee DALSAT | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Shirkadda Dalkom Soomaaliya oo daahfurtay adeegga cusub ee DALSAT
Shirkadda Dalkom Soomaaliya oo daahfurtay adeegga cusub ee DALSAT
Shirkadda Dalkom Soomaaliya oo horay dalka uga hirgelisey adeegga viber optiga ayaa waxa ay daahfurtay adeegyo cusub oo baahiyihii tecknoologiyadda SATLETka ay uga baahi tirayso .
Dalkom ayaa adeegyada cusub ugu magic dartay DALSAT. “waxaa adeegaani xallinayaa dhibaatooyinkii teknoolojiyadda ee dibadda loo doonan jirey” sidaasi waxaa yiri Maxamed Jaamac oo ah maareeyaha shirkadda Dalkom Somalia
DALSAT: Waxaa laga heli karaa adeegyada dhinaca teknoolojiyada Satleytka ee dhinaca Internetka sida , Isku xirka xarumaha shirkadaha isgaarsiinta, Jaamacadaha, bangiyada iyo shirkadaha duulimaadyada goboladadalka oo dhan.
Waxaa kaloo laga heli karaa adeegyada DALSAT lalinta warbaahinta oo idil gaarahaan tabinta TVyada tooska ah.
DALSAT waxaa uu shirkadaha soomaalida ka haqabtirayaa teknoolojiyada KEYDINTA macluumaadka gaarahaan xogaha Jaamacadaha , shirkadaha isgaarsiinta , warbaahinta iyo Bangiyadaba.
Maareeyaha shirkadda DALKOM SOMALIA Jaamac ayaa sheegay in adeegyadaan heliddooda dhib lagala kulmi jirey qarash bandanna ku bixi jirey laakiin haatan laga heli karo isagoo jaban dalka gudihiisa.Haddaba ciddii daneyneysa in ay si fudud u hesho INTERNET, si fududna u laliso warar amaba daneyneysa isku xirka xarumaha iyo kaydinta macaluumaadka waxay arrimaah oo dhan uga bogan kartaa DALSAT.
Waxaa lagala xiriiri karaa:
Tel: +25261-7745050 ama +25262-3745050 ama +25269-0745050
Previous articleShil gaar oo sababay dhimashada in ka badan 30 qof oo ka dhacay Kenya
Next articleAqalka Sare oo u codeeyay saxiixa miisaaniyadda